» Amisom Iyo Dowlada oo Howgalo Ka Wada Magaalada Marka
Amisom Iyo Dowlada oo Howgalo Ka Wada Magaalada Marka
Jan 14, 2013 - jawaab	Aqrisatay:1991Sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom ayaa saaka waxay baarintaano ka wadaan degmadaasi.
Waxii ka dambeeyay markii ciidamada AMISOM Qarax lagula eegtay degmadaasi Marka ee gobolka Shabeelaha hoose,waxaa sii kordhay howlgalka ay sameynayaan ciidamada dowlada ee ku sugan degmadasi.
Arinta ayaa ka dambeysay ka dib markii ciidamada AMISOM Xalay waddooyinka degmada ay kusoo faafeen islamarkaana ay baarintaano ku dhaqaaqeen oo ay ku baadi goobayaan dadka falalka amni darada geysanaya.
Ma jiro wax hadal ah oo ilaa iyo hadda ay jeediyeen masuuliyiin degmada iyo kan gobolka oo ay ku sharaxayaan waxyaabaha lagu soo qabtay howlgalkii saaka iyo xalay ka socda degmada Marka.
AMISOM ayaa maalintii shalay qarax lagula eegtay degmadaasi Marka iyaga oo wadada marayay.